नवलपरासीमा लोकल कुखुरामा पनि भेटियो बर्डफ्लू, एक किमी क्षेत्र संकटग्रस्त घोषणा - Medianp.com
नवलपरासीमा लोकल कुखुरामा पनि भेटियो बर्डफ्लू, एक किमी क्षेत्र संकटग्रस्त घोषणा
काठमाडौं, २५ वैशाख । काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा पनि बर्डफ्लूको संक्रमण फैलिएको छ । केही दिनअघि काभ्रेका एक युवाको बर्डफ्लूबाट मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै यसको सन्त्रास बढिरहेका बेला नवलपरासीमा लोकल कुखुरामै बर्डफ्लू देखिएको छ ।
पूर्वी नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिका–२ नन्दपुरका पिताम्बर महतोले पालेका लोकल कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएको हो । महतोले पालेका १ सय ५० लोकल कुखुरामध्ये ७५ प्रतिशत बढी मरेपछि उनले केन्द्रीय पंक्षी प्रयोगशाला चितवनमा नमुना परीक्षणका लागि लगेका थिए ।
उक्त नमूनालाई केन्द्रीय भेटेरिनरी प्रयोगशाला काठमाडौंले समेत प्रमाणित गरेपछि मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार कुखुरा र पंक्षीजन्य वस्तुलाई बुधबार बिहान नष्ट गरिएको मध्यविन्दु नगरपालिका पशु विकास शाखाका प्रमुख डा.श्यामकृष्ण तिवारीले जानकारी दिएका छन् । बर्डफ्लु नियन्त्रण गर्नका लागि नन्दपुर गाउँको १ किमि क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यस क्रममा १ सय ८१ गोटा लोकल कुखुरा, ६५ गोटा हाँस, दाना, अण्डा र कुखुराका सुली नष्ट गरिएको डा. तिवारीले जानकारी दिए ।
दिवाकरकि दुलही बन्दा यस्ती देखिइन नायिका दिपिका ! हेर्नुहोस दुलही दिपिकाका ७ तस्विर